ဆွဲမက်ဖွယ် ရင် သပ်ရှုမောစရာ အမိုက် စား ပုံရိပ်လေးတွေ တင်ပေး လိုက် တဲ့ “နန်းမွေ့စံ” – Shwe Yoe
ဆွဲမက်ဖွယ် ရင် သပ်ရှုမောစရာ အမိုက် စား ပုံရိပ်လေးတွေ တင်ပေး လိုက် တဲ့ “နန်းမွေ့စံ”
အခုလက်ရှိ တင်ပေးလာတဲ့ နန်းမွေ့စံရဲ့ ပုံလေးတွေဟာဆိုရင်လည်း ပရိသတ်ရင်ကိုထိမှန်စေမှာအသေအချာပါပဲနော်။ မွေ့စံဟာ သူမရဲ့ လှသွေးကြွယ်နေတဲ့ပုံလေးတွေ တင်ပေးလာခဲ့တာပါခင်ဗျ။တင်ပေးလာခဲ့တာပါခင်ဗျ။ ကဲ…. ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်နော်။ နန်းမွေ့စံကတော့ အခုလက်ရှိမှာ ဆိုရင် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုအများအပြားရရှိနေတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ။
သူမဟာ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားကိုလည်း ပိုင်ဆိုင် ထားတာဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ပုံရိပ်အလန်းတွေဟာလည်း ပုရိသတွေရဲ့ရင် ကိုအမှန်အကန် ဟတ်ထိစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ နန်းမွေ့စံဟာ အခုဆိုရင် ကိုယ်ပိုင်brandနဲ့ အင်္ကျီတွေထုတ်နေတာလည်းဖြစ်ပြီး အနုပညာ လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဆက်တိုက်ဆိုသလို လုပ်‌ ကိုင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။
နန်းမွေ့စံရဲ့ ခပ်မိုက်မိုက်ပုံစံလေးနဲ့ အလန်းစား ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းတွေဟာလည်း ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်း စားနေတာပါနော်။နန်းမွေ့စံဟာ မကြာသေးမီကလည်း သူမရဲ့အလန်းစားပုံလေးတွေကို social networkမှာမျှဝေပေးလာပြန်ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်နော်။
အခုလကျရှိ တငျပေးလာတဲ့ နနျးမှစေံ့ရဲ့ ပုံလေးတှဟောဆိုရငျလညျး ပရိသတျရငျကိုထိမှနျစမှောအသအေခြာပါပဲနျော။ မှစေံ့ဟာ သူမရဲ့ လှသှေးကွှယျနတေဲ့ပုံလေးတှေ တငျပေးလာခဲ့တာပါခငျဗြ။တငျပေးလာခဲ့တာပါခငျဗြ။ ကဲ…. ပရိသတျတှအေတှကျ ပွနျလညျမြှဝပေေး လိုကျပါတယျနျော။ နနျးမှစေံ့ကတော့ အခုလကျရှိမှာ ဆိုရငျ ပရိတျသတျတှရေဲ့စိတျဝငျစားမှုအမြားအပွားရရှိနတေဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျပါ။
သူမဟာ အမိုကျစားခန်ဓာကိုယျ အခြိုးအစားကိုလညျး ပိုငျဆိုငျ ထားတာဖွဈပွီး သူမရဲ့ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ပုံရိပျအလနျးတှဟောလညျး ပုရိသတှရေဲ့ရငျ ကိုအမှနျအကနျ ဟတျထိစတောလညျးဖွဈပါတယျ။ နနျးမှစေံ့ဟာ အခုဆိုရငျ ကိုယျပိုငျbrandနဲ့ အင်ျကြီတှထေုတျနတောလညျးဖွဈပွီး အနုပညာ လှုပျရှားမှုတှကေိုဆကျတိုကျဆိုသလို လုပျ‌ ကိုငျနတောတှရေ့ပါတယျ။
နနျးမှစေံ့ရဲ့ ခပျမိုကျမိုကျပုံစံလေးနဲ့ အလနျးစား ဖကျရှငျဒီဇိုငျးတှဟောလညျး ပရိသတျတှကွေားမှာ ရပေနျး စားနတောပါနျော။နနျးမှစေံ့ဟာ မကွာသေးမီကလညျး သူမရဲ့အလနျးစားပုံလေးတှကေို social networkမှာမြှဝပေေးလာပွနျပါတယျ။ ပရိတျသတျကွီးအတှကျ ပွနျလညျမြှဝလေိုကျပါတယျနျော။
ရင်အေးသွားစေလောက်တဲ့ အပြုံးလေးတွေနဲ့ ရင်ခုန်စရာကောင်းလောက်အောင် ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိလှနေတဲ့ နွယ်ဒါလီထွန်း
ကမ်းခြေမှာ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်အလှတွေ ပေါ်လွင်နေတဲ့ ခေးလုကြီး လုလုအောင်